Since 1960 – somaliland diyaar uma aha inay markale afar siyaasi qixiyaan, damaca gaboose iyo siilaanyana waa jar – San Jose Dentist | San Jose Dentist
Since 1960 – somaliland diyaar uma aha inay markale afar siyaasi qixiyaan, damaca gaboose iyo siilaanyana waa jar
SOMALILAND DIYAAR UMA AHA INAY MARKALE AFAR SIYAASI QIXIYAAN, DAMACA GABOOSE IYO SIILAANYANA WAA JAR
Oodweyne (Somalilandnation)- Xaaji Saleem Cali Ducaale, oo xubin ka ah Golaha Guurtida, kana soo jeeda Gobolka Oodwayne , ayaa ka dhawaajiyay inaan distoorka qaranka loo bedeli karin dano gaar ah iyo damac siyaasadeed.
Xaaji Saleem oo si wayn looga tixgeliyo Gacanka Carabta iyo guud ahanba Somaliland, ayaa waraysi ku bixiyay shir uu ku qabtay magaaladda Abu Dhabi , ee Emaaraadka Carabta kaga hadlay xaalada dalka Somaliland ee xiligan.
Xaajigu wuxu ku tilmaamay heshiiska Mudane Siilaanyo iyo Dr.Gaboose, mid jar-iska-xoor ah ,oo runta iyo waaqiciga ka fog. Wuxuu sheegay in Distoorka Qaranku aanu ahayn buug jeebka ugu jira Mudane Siilaanyo, balse uu yahay Axdi Qaran oo shacbigu wada ilaashanaayo.
Waxa bedeli kara oo qudha labada Gole ee sharci dejinta, iyo afti shacabka laga qaado “National Refrendum”. Waa ayaan darro inuu nin siyaasi ahi ku shaqaysto distoorka , oo ragna ugu ballan qaado abuurid jago cusub oo ah “ Prime Minister”, qaar kalena ugu ballan qaado inuu axsaab u furi doono, iyo inuu qabiil waliba yeelan doono xisbi u gaar ayu yidhi Xaajigu.
Tallaaboyinkas jar-iska-xoornimda ahi waxay Somaliland u horseedi karaan jaahwareer siyaasadeed ,xaslooni-darro iyo fawdo,Somaliland diyaaar uma aha inay mar danbe qaxiyaan afar siyaasi, waxaanaan shacbiga ku boorinayaa inay ilaashadaan distoorkooda iyo xornimadooda.
Mar Xaajika wax laga waydiiyay, Diiwaan Gelinta Gobolka Toghdeer, wuxuu sheegay in si wayn loogu diyaar garoobay, si nabad gelyo ahna u socoto.
Huda tv – qolka guurka allah awgiis la isku barto